Debian 11.1 iri pano neyekutanga gadziriso yeBullseye | Linux Vakapindwa muropa
Nyamavhuvhu 14 Bullseye akatanga kumhanya. Iri ndiro zita rekodhi yazvino vhezheni yeimwe yezvakanyanya kugoverwa kweLinux munyika, imwe yacho, semuenzaniso, iyo inozivikanwa Ubuntu yakavakirwa. Kufanana nezvose, iyi vhezheni ichatsigirwa kwemakore mashanu, uye kuchine maviri ekuenda kusvika kunotevera, izvo hazvireve kuti hakuzove nekugadziriswa. Ichokwadi manheru apfuura llegó Debian 11.1 nezvimedu zvekutanga.
Zvinyorwa paDebian Point Kugadziridza hazviwanzo kuve zvinonyanya kufadza, uye isu tinowanzo tarisa pane kuburitswa pachako. Muchokwadi, chirongwa icho chinogadzira iyo sisitimu yekushambadzira hachishambadze chero chinhu chinopenga futi, ichitarisa kutaura nezve iyo zvigadziridzo zvakaitwa uye kuti haisi vhezheni itsva yesisitimu, saka hazvidi kuti kuitise kumisikidza kubva pakutanga; ingo gadziridza iwo mapakeji
Debian 11.1 ine zvigadziriso
Ziva kuti kuburitswa kweruvara haisi vhezheni itsva yeDebian 11, asi inongogadziridza mamwe emapakeji akaunganidzwa. Hapana chikonzero chekurasa yako yekare yekuisa midhiya. Mushure mekumisikidzwa, mapakeji anogona kuvandudzwa kushanduro dzazvino vachishandisa yakagadziridzwa Debian girazi.
Panguva imwechete seDebian 11.1, chirongwa chakaburitsa Debian 10.11, inova yegumi neimwe yegumi nhanhatu poindi yekuvandudza. Debian 10 yakaburitswa muzhizha re2019, saka ichine mamwe makore matatu ekutsigirwa asara uye icharamba ichiburitsa zvigadziriso zvekuchengetedza kusvika 2024.
Pakati pezvimedu zvakaunzwa muDebian 11.1 isu tine 24 chengetedzo. Mamwe ese, aine huwandu hunokwana makumi manomwe nematatu, anogoverwa pakati pemapakeji ehurongwa hwakasiyana seMutter, Nautilus kana iyo Kernel.
Debian 11 iwe ucharamba uchigamuchira mishumo yakadai kusvika 2026. Iyo inotevera vhezheni ichave Debian 12, codenamed Bookworm, iyo green honye ine magirazi kubva kuToy Story nhevedzano.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Debian 11.1 iri pano neyekutanga gadziriso yeBullseye. Inouya neDebian 10.11
Mabasa haana kuigadzira. Nhoroondo yechokwadi yeiyo graphical interface.